Microsoft: ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကို Ferrari Mailing List ထဲထည့်ပါ Martech Zone
Microsoft: ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကို Ferrari Mailing List ထဲထည့်ပါ
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 29, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အော်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ (အကယ်၍ မင်းကကျွန်ုပ်ကိုယခုအချိန်တွင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်လက်ချောင်းများကိုလှုပ်ရမ်းပြီးလူးဝစ်ဘလက်ခ်ကဲ့သို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုမြည်တမ်းနေသည်။ )
အကြောင်းအများကြီး ado ဘာမြှ ထိုအပေါ် blogosphere အခုအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က Vista နဲ့ Ferrari လက်ပ်တော့တချို့ကိုလွှတ်လိုက်တယ် A-List ကိုဘလော့ဂါအတော်များများသို့ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ပြည်သူ့ထွက် freaking နေကြသည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုဝယ်နေသည်သို့မဟုတ် JFK အသတ်ခံရမှုနောက်ကွယ်မှသို့မဟုတ်မြောက်ကိုရီးယားသို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုရောင်းစားသည်နှင့်တူသည်။
ငါဒီတစ်ခုအပေါ် Scoble နှင့်အတူပါ!
လူတို့နိုးပါ၊ ဒီဟာကစီးပွားရေးပဲ! ၎င်းသည် ၀ ယ်သူအများဆုံးကိုလွှမ်းမိုးမည့်နေရာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စျေးကွက်သမားတိုင်း၏အဓိကတာဝန်ဖြစ်သည်။ သင့်မှာဘတ်ဂျက်ရှိတယ်၊ ခြွင်းချက်များမှာ -
ဤသည် Shaq ၏တစ်နှစ်တာအတွက်ထုံးစံအတိုင်းပြုလုပ်ထားသောစနီကာအသစ်တစ်မျိုးရရှိခြင်းနှင့်ကွာခြားသည်။ ဘတ်စကတ်ဘောကစားနေသည့်အခြားကလေးငယ်များသည် Shaq တွင်အခမဲ့စနီကာများရရှိနေကြောင်းသူတို့၏မိခင်များကိုအော်ဟစ်နေသလား။ မဟုတ်ဘူး! အမေကမုန့်စိမ်းကိုတက်အောင်လုပ်နေတယ်၊
နာစကာပြိုင်ပွဲရဲ့အဆုံးကိုမြင်ဖူးလား။ ကားမောင်းသူကခေါင်းတလုံးကိုချပြီး soda တံဆိပ်တစ်ခွက်သောက်သည်။ နောက် ဦး ထုပ်တစ်ခုတွင်သူတို့၌မြည်းတံဆိပ်ကြီးများရှိသည်။ သူသည်ဝါကျတိုင်းစပွန်ဆာအမည် ၅ ခုဖြင့်စတင်သည်။ "ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို Jim ပြောပြလိုက်တယ်၊ ဒီ Dupont, Reeses, Toshiba, Levi's, Chevrolet တကယ်ပဲထွက်လာတယ်" နာစကာမှထွက်လာသူမည်သူမဆိုက“ မင်းငါ့ကိုငါ့ကိုဒီအမှတ်တံဆိပ်ကြော်ငြာတွေနဲ့လွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ!” ဟုအော်ဟစ်လား။ နံပါတ်
Tiger Woods သည်သူအသုံးပြုသောကလပ်အသင်းများသို့မဟုတ်ဘောလုံးများသို့မဟုတ် Cadillac အားပေးသောသူ၏ရှပ်အင်္ကျီအပေါ်မကျေလည်မှုဖြစ်သင့်သည်။ လူများလား၊ ဘဝတစ်ခုရလိုက်ပါ။ ငါတို့ကနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူး။ သတင်းစာနှင့်သတင်းစာလိုင်းများကိုခွဲခြားရန်လိုသည့်သတင်းစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိန်အဟုန်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါကျိန်ဆိုခြင်းကိုမပြု၊ ငါကဘလော့ဂါတစ်ယောက်ပါ ကျွန်ုပ်တွင်တစ်နေ့လျှင်စာဖတ်သူ ၅၀၀ ရှိပြီးကျွန်ုပ်၏တွဲဖက်စျေးကွက်သည်ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတောင်မဖုံးထားပါ။
သူတို့ရဲ့စာဖတ်သူတွေကိုတာဝန်ရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသောလူကတော့ Microsoft မဟုတ်ဘဲဘလော့ဂါပဲ။ ပထမဆုံးဘလော့ဂါတွေကသူတို့ရဲ့လက်တော့ပ်တွေ၊ ဟေ့ငါမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကနေဒီကောင်းတဲ့လက်တော့ကိုရတယ် ဘာလို့ထင်လဲ?! ဒါကထုတ်ဖော်ခဲ့ယခုသင်သိ။
ငါကိုယ်တိုင် Microsoft နှင့် Laptops နှင့် Vista တို့ကိုဖြန့်ဝေလိုသည်။ ငါပိုက်ဆံရကျိုးနပ်သည်ဖြစ်စေမလည်ပတ်ပုံကိုသိချင်တယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကငါ့ကိုမင်းစာရင်းထဲသွင်းလိုက်တယ် အကြှနျုပျ၏စာဖတ်သူများသိလို!
Blogger မှမေးခွန်း (whiny voice) - Mr. Evil Microsoft! မင်းတို့ကတကယ်ကိုစျေးကြီးတဲ့ Laptop အချို့ကို A-list blogger တွေဆီဖြန့်ပေးတယ်ဆိုတာငါတို့ကြားခဲ့ရတယ်။ မင်းတို့ကဒီဘလော့ဂါတွေကို Vista ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဘလော့ဂ်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဒီကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ဒီဘလော့ဂါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားနေတာလို့မင်းထင်ပါတယ်။ ဒါအမှန်လား
တုံ့ပြန်မှု Douglas Karr, Microsoft ၏ VP စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (အမှန်တကယ်) - ဟုတ်၊ ဒါငါ့အလုပ်ပဲ
ဒီ post အတွက်မိုက်ခရိုဆော့ကကျွန်တော့်ကိုဘာမှမပေးခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ငါက Mac ကနေပို့စ်တင်တယ်။
ငါ Pat Colle ထံမှအချို့သော Colts လက်မှတ်တွေကိုတစ်ကြိမ်ရခဲ့တယျ။ လူတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေလား? ငါသည်သူ၏ဘလော့ဂ်နှင့်အတူတစ်တန်ထွက်ကူညီပေးခဲ့သည်ငါသူရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကသူတို့နှင့်ငါ့ကိုအံ့သြသွားတယ်။ မင်းငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေလား ငါ့စာမျက်နှာအိမ်ခြံမြေတစ်ခုခုကိုပြန်အမ်းပြီးပြီလား။ ဒီတစ်ခါလည်းငါတကယ်မသေချာဘူး သူက blog ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါကြောင့်ငါမကြာခဏကိုးကားခဲ့တယ်။ သွားဖတ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ဝစ်ဂျက်အသစ်ကိုသင်ရပြီလား။ အရမ်းပျော်တယ်၊ ဒီမှာသွား၊
ဤ blog ကို PHP, MySQL နှင့်လုံးဝမွမ်းမံထားသော ၁၀၀% အခမဲ့ plugins များဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။ ထိုအခါငါကသူတို့ကိုချစ်! ငါ့ကိုအခမဲ့ပေးသောကြောင့်ယခုသူတို့အော်ဟစ်သွားကြ၊
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Aid: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပြည်နယ်
မတ်လ 15, 2008 မှာ 4: 17 pm တွင်